Akụkọ - Gini ka anyi kwesiri ilebara anya mgbe anyi na eme ihe nri
Gịnị Ka Anyị Kwesịrị Attaa Ntị Mgbe Anyị Na-eme Nri Nkwakọ ngwaahịa
Nri dị oke mkpa na ndụ ndị mmadụ. Designdị nkwakọ ngwaahịa dị mma nwere ike ọ bụghị naanị ịdọrọ uche nke ndị na-azụ ahịa, kamakwa ọ na-akpali agụụ nke ndị ahịa ịzụta. Yabụ, kedu akụkụ ndị kwesịrị ị toa ntị na nhazi nkwakọ ngwaahịa?
Mgbe ị na-ahọrọ ihe nkwakọ ngwaahịa nri, anyị kwesịrị ịtụle okwu gbasara nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi. Ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa dị n'ime ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa mpụga, anyị aghaghị ị paya ntị na nhọrọ nke ihe. N'ikwekọ n'ụkpụrụ nke ijide nchekwa nri na ichedo gburugburu ebe obibi, anyị ga-ahọrọ ihe ndị nwere gburugburu ebe obibi na ahụike.
Usoro ihe ngosi ezi uche dị na ya nwere ike ịkpali ikike ịzụta ihe ruo n'ókè ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, maka nri nri ụmụaka, a ga-ahọrọ ụfọdụ ụdị eserese na-atọ ọchị n'ime ụdị nkwakọ ngwaahịa, ma ọ bụ ụfọdụ mkpụrụedemede eserese na-ewu ewu karịa ụmụaka.
Ntinye ederede bu otu n'ime ihe di nkpa na nhazi nkwakọ. Ọ bụ ezie na ngosipụta nke ederede dị obere karịa ka eserese, ọ bụ ihe atụ doro anya. Dị nri dị iche iche dịkwa iche na ngosipụta nke okwu, na mgbakwunye na ụdị nri nri, ihe ndị dị na ya, ikikere azụmaahịa dị ọcha, wdg. zụta.
Nhọrọ nke agba dị ezigbo mkpa maka nkwakọ ngwaahịa nri, agba dị iche iche na-ewetara ndị mmadụ ahụmịhe mmetụ dị iche iche. Mgbe ị na-ahọrọ agba, anyị kwesịrị ịkpachara anya. Colorsdị dị iche iche nwere ike igosipụta ụdị nri dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, mpaghara na mba dị iche iche nwere agba nke aka ha kachasị amasị ha, ụcha dị iche na-adị iche site na ụtọ dị iche. Ya mere, anyị kwesịrị ikpokọta njirimara nke nri n'onwe ya ịhọrọ agba nkwakọ ngwaahịa.
Na mgbakwunye na nke dị n'elu, enwere ọtụtụ akụkụ dị mkpa ka a tụlee mgbe ị na-eme atụmatụ nkwakọ ngwaahịa, dị ka nchekwa na usoro njem njem nri, izere ọkụ, wdg, ihe niile kwesịrị ịtụle.
Post oge: Mar-05-2021